हाँस्न बाध्य पार्ने गज्जबको जोक-नौ कि दस - Dakpi Khabar
हाँस्न बाध्य पार्ने गज्जबको जोक-नौ कि दस
एक पटक एउटा सुक्खा मरुभूमिमा एउटा मान्छेले दस वटा उँटहरुलाई पानीको पोखरीतिर लगिराखेको थियो । केही मिल हिँडेपछि उसले एउटामा चढेर बाँकी उँट गन्यो । उसले नौ वटा गन्यो र तुरुन्दै हराएको एउटा उँट खोज्न थाल्यो । कतै उँट नदेखेर उसले एउटा हराएछ भन्ने ठान्यो । खोज्न छाडेर ऊ दुखित् भयो र हरेस खाएर आफ्नो उँटतिरै आयो ।
ऊ अलि खुसी भयो–त्यहाँ दस वटै देख्यो उसले । खुसी हुँदै ऊ एउटामा चढ्यो र फेरि एक पटक गन्ने विचार ग¥यो । यसो गन्दा त फेरि नौ वटा मात्रै ! ऊ फेरि ओर्ल्यो, जिल्ल प¥यो र फेरि नरमाइलो मानेर खोज्न थाल्यो । हराएको उँट पाउन सकिएन । ऊ फेरि झुण्डतिर आयो र गन्यो । अचम्म ! उसका दस वटा उँटहरु विस्तारै हिडिरहेका थिए । उसले मरुभूमिको गर्मीलाई दोस दियो र अन्तिम उँटमाथि फेरि चढ्यो । तेस्रो पटक फेरि गन्यो ।
उसले अझै बुझ्न सकेन किन एउटा उँट हराएको हराएकै छ भनेर । शैतानलाई गाली गर्दै ऊ तल ओल्र्यो र फेरि गन्यो । त्यहाँ दस वटै उँटहरु थिए । ‘ठिक छ, जाली शैतान !’ ऊ फेरि फतफतायो, ‘म हिँड्याहिँड्यै गर्छु बरु र सबै उँट आफैसँग राखिछाड्छु । चढेर एउटा हराउने पार्दिनँ ।’इरान